Xasuus Horre: Kareena Kapoor oo banaanka soo dhigtay 5-xidig oo ay Bollywood-ka u taqaan inay yihiin atoorayaal dhameestiran (+Video) – Filimside.net
Xasuus Horre: Kareena Kapoor oo banaanka soo dhigtay 5-xidig oo ay Bollywood-ka u taqaan inay yihiin atoorayaal dhameestiran (+Video)
Kareena Kapoor Khan waxay ka mid tahay shaqsiyaadka Bollywood-ka ugu awooda badan xiligaan sidoo kalena mudo dheer fanka ka tirsaneyd.
Bebo waxay caan ku tahay inaysan ka labo labeynin fikirkeeda gaarka ah marka arin xasaasi ah wax laga weydiiyo waxaana lagu tilmaamaa atirisho karti badan shaqo ahaan iyo hadal ahaan.
Kareena Kapoor ayadoo tixgalineyso dhamaan jilaayaasha Bollywood-ka gaar ahaan kuwa labka ah haddana jilaa kasto atoore uma taqaano xidigtaan.
Bebo xili ay ka qayb qaadaneesay barnaamijka Look who’s talking uu ku wareesatay Niranjan Iyengar sanadii 2014 waxay ku sheegtay in qof kasto jilaa noqon karo balse Bollywood ahaan iyadana 5-jilaa ayay u taqaan inay yihiin atoorayaal dhameestiran dhanka jiliinka ama sida shaqada loogu kala wacan yahay marka shaashada lasoo hor istaago.
Kareena waxay sheegtay in Saif Ali Khan, Ajay Devgn, Hrithik Roshan, Ranbir Kapoor iyo Aamir Khan ay u taqaano atoorayaal ama kuwa xirfad jiliin ahaan iyada aad u qadariso.
Waxaa cajiib ah in Kareena sedexda Khans ay kala dooratay oo ay kaliya Aamir Khan atoore u taqaan marka laga hadlaayo xirfada filim jilista dhan walbo halka Salman Khan iyo Shah Rukh Khan ay iska dafirtay.
Kareena su’aashan in la weydiiyo waxay ku timid markii la weydiiyay walaalkeed ama wiilka ay ilmo adeerada yihiin Ranbir Kapoor inuu iyada oo kale yahay oo uu shaqo walbo qaban karo.
Waxayna Bebo amaan kala dul dhacday Ranbir iyo waxqabadkiisa heerka ah sare ah filimada uu dooranayo iyo bandhigyada uu sameenayo ayadoo markii dambe sheegtay in Ranbir uu ka mid yahay shanta jilaa oo ay u taqaano inay atoore yihiin ama door walbo sameyn karaan.
Fadlan hoos kaga bogo wareygsiga Kareena oo dhameestiran ayadoo dhinacyo badan wax laga weydiinayo nolosheeda iyo shaqadeeda waana wareysi dhacay Oct 2014: